पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जिम्मा पाएको रानीपोखरी पुननिर्माणमा काठमांडौ महानगरपालिकाद्वारा समिति गठन ! - LaltinKhabar
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जिम्मा पाएको रानीपोखरी पुननिर्माणमा काठमांडौ महानगरपालिकाद्वारा समिति गठन !
काठमाडौं । काठमांडौ महानगरपालिको ३० औँ कार्यपालिका बैठकले रानी पोखरी पुननिर्माणका लागि ५ सदस्यीय उपभोक्ता समिति सदस्यहरुको प्रस्तावित नाम अनुमोदन गरेको छ । अनुमोदित नाममा अजयरत्न स्थापितको संयोजक, सचिव रोशनकाजी तुलाधर, कोषाध्यक्ष होमप्रसाद खड्गी तथा सदस्यहरुमा दीपकराज तुलाधर र दीपेन्द्र खड्गी रहेका छन । साथैै बैठकले भरतलाल श्रेष्ठ, चिनियाँमान बज्राचार्य र भाइराम खड्गी सम्मिलित रानीपोखरी पुननिर्माणको अनुगमन तथा समन्वय समिति समेत गठन गरेको छ ।
बैठकले हिँउदे अधिबेशन चैत्र २४ गते राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार सम्पन्न ३० औँ कार्यपालिका बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । महानगरका प्रबक्ता ईश्वरमान डंगोलका अनुसार अधिबेशनमा तीन बिधेयक पेश गर्ने सहमति प्रदान गरीएको छ । ती बिधेयकमा ‘सार्वजनिक निजि साझेदारी बिधेयक,२०७५’ ,‘सहरी योजना आयोजना विधेयक ,२०७५’ र ‘सार्वजनिक यातायात व्यवस्था बिधेयक रहेका छन ।
बैठकले पुरानो बसपार्कमा निर्माणाधिन काठमाडौं टावरको निर्माण प्रक्रियामा कामको गुणस्तर, सम्झौतामा उल्लेख भएका शर्तहरुको पालना र समय सीमा लगाायतका बिषयलाई स्वतन्त्र परीक्षणका लागि परामर्शदाता छनोट गरी परिक्षण गराउने निर्णय गरेको छ । बैठकले सम्पदा क्षेत्रमा निर्माण भएका भवनहरुको अभिलेखीकरण समेत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र बितरण सम्बन्धि कार्यबिधि २०७५ समेतलाई अनुमोदन भएको थियो । कार्यबिधिबमोजिम अपाङ्गता भएको व्यक्ति स्वयम् वा अभिभावक तथा संरक्षकमध्ये कसैले अपाङ्ता भएको पुष्टि हुने कागजातसहित वडामा निवेदन दिएपछि वडाले सामाजिक विकास विभागमा शिफारिस गर्ने र बिभागले परिचय उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।